ကျန်းမာပြီး လှပစေမယ့် ငါးအရေခွံသုပ် - For her Myanmar
ချိုချိုချဉ်ချဉ်နဲ့ အရသာရှိတဲ့အပြင် ကျန်းလည်းကျန်းမာစေတယ်ဆိုတော့ကား…
ထိုင်းမလေးတွေ အသားအရေကြည်ကြည်လေးနဲ့ သွယ်သွယ်လျလျလေး ဖြစ်နေကြတဲ့ လျှို့ဝှက်ချက်က ငါးအရေခွံလို့ ပြောရင် ယုံမလား ယောင်းတို့… ငါးအရေခွံမှာပါတဲ့ collagen (ကော်လာဂျင်) က အသားအရေကို တင်းရင်းကြည်လင်စေပါတယ်။ လတ်ဆတ်တဲ့ အသီးအရွက်တွေကလည်း အာဟာရပြည့်ဝစေပြီး အဆလည်းနည်းတယ်ဆိုတော့ ကျန်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်တဲ့ ဒီငါးအရေခွံသုပ်က တကယ်လည်း ထိုင်းမလေးတွေရဲ့ လျှို့ဝှက်ချက်ဖြစ်နိုင်တယ်နော်။ ကိုယ်တွေလည်း စားဖို့ အချိန်တန်ပြီလေ… လှလှ၊မလှလှ စားကောင်းရင်တော့ စားရမှာပဲရယ် 😛
၁။ ငါးအရေခွံခြောက် ၁၀၀ ဂရမ်
၂။ သရက်သီးစိမ်း ၁၀၀ ဂရမ်
၃။ မုန်လာဥ ၅၀ ဂရမ်
၄။ ကြက်သွန်နီ ၅၀ ဂရမ်
၅။ ကြက်သွန်မြိတ် ၅၀ ဂရမ်
၆။ ငှက်ပျောဖူး ၁၀၀ ဂရမ်
၇။ နှမ်းရွက် ၁၀၀ ဂရမ်
၈။ တရုတ်နံနံ ၁၀ ဂရမ်
၉။ မြေပဲလှော် ၅၀ ဂရမ်
၁၀။ ချင်း ၅၀ ဂရမ်
၁၁။ ဆန်အရက် ၃၀ ml
၁၂။ ကြက်သွန်ဖြူ ၁၀ ဂရမ်
၁၃။ သံပရာသီး ၁ လုံး
၁၄။ မီးကင်ထားတဲ့ ဆန်ပြား ၂ ခု
၁၅။ ဆီ ၁၅ ml
၁၆။ ငါးငံပြာရည် ၅ ml
၁၇။ ငံပြာရည် ၅ ml
၁၈။ ငရုတ်သီးမှုန့် ၁၀ ဂရမ်
အသုပ်ထဲမှာ ထည့်နယ်ဖို့ အရသာစပ်မယ်ဆိုရင်တော့
ငါးငံပြာရည် ၃၀ ml
သံပရာရည် ၅၀ ml
ကြက်သွန်ဖြူ ၅၀ ဂရမ်
ဂျင်း ၁၀ ဂရမ် (အမျှင်လေးတွေဖြစ်အောင် လှီးထားပါ။)
ငရုတ်သီးအနီ ၅ ဂရမ် (ထောင်းထားပါ။)
ငါးအရေခွံကို ချင်း ၂၀ ဂရမ်၊ သံပရာရည်၊ ဆန်အရက် တို့နဲ့အတူ တစ်ရက်လောက် ကြိုစိမ်ထားလိုက်ပါ။ အရေခွံတွေပွလာပြီဆိုရင် ငါးအရေခွံမှာ ကပ်နေတဲ့ အသားတွေကို ဖယ်ထုတ်လိုက်ပါ။ ပြီးရင်တော့ ချင်း ၂၀ ဂရမ် နဲ့ ဆန်အရက် ၁၅ ml တို့နဲ့အတူ ရေနည်းနည်းထည့်ပြီး ၅ မိနစ်လောက် ပြုတ်ထားလိုက်ပါ။ ပြုတ်ပြီးရင် အရေခွံတွေကို အညှီနံ့ပြောင်သွားအောင် ရေနဲ့ အထပ်ထပ်ဆေးပါ။
သရက်သီးတွေကို အခွံခွာပြီး အမျှင်လေးတွေဖြစ်အောင် လှီးထားပါ။ ငှက်ပျောဖူးကို ပါးပါးလှီးထားပါ။ ကြက်သွန်နီကိုလည်း အခွံခွာ၊ အကွင်းလေးတွေဖြစ်အောင် လှီးထားပြီး မုန်လာဥကို အမျှင်ဖြစ်အောင်လှီးထားပါ။ ကြက်သွန်မြိတ်ကိုလည်း လှီးထားပါ။ တရုတ်နံနံပင်နဲ့ နှမ်းရွက်တွေကိုလည်း ရိတ်ရိတ်လေးတွေ လှီးထားပါ။ ကျန်တဲ့ ချင်းတွေကို အမျှင်လေးတွေဖြစ်အောင် လှီးထားပါ။
ငါးအရေခွံတွေကို သန့်စင်ပြီးပြီဆိုရင်တော့ လက်မဝက်လောက် အပိုင်းလေးတွေ ဖြစ်အောင် ညှပ်ထားလိုက်ပါ။ အိုးတစ်ခုကို အပူပေး ဆီအနည်းငယ်ထည့်ပြီး ကြက်သွန်ဖြူ နဲ့ ချင်းကို ဆီသတ်ပါ။ ပြီးရင်တော့ ငါးအရေခွံတွေကိုပါထည့်ပြီး ကြော်ပေးပါ။ (တကယ်လို့ မြန်မြန်လည်း စားချင်တယ်၊ အလုပ်လည်းမရှုပ်ချင်ဘူးဆိုရင်တော့ ရယ်ဒီမိတ် ငါးအရေခွံကြော်ထုပ်လေးနဲ့ သုပ်လို့ရပါတယ်ယောင်းရေ။)
ပြီးရင်တော့ ဆန်အရက်ကိုပါ ထည့်ပြီး မီးအပူကို လျှော့ထားလိုက်ပါ။ နောက်ဆုံးမှ ငံပြာရည်အနည်းငယ်ထည့်ပြီး ဆက်ကြော်ပေးပါ။ အနံ့မွှေးလာပြီဆိုရင် မီးပိတ်ပြီး ငါးအရေခွံတွေကို အအေးခံထားလိုက်ပါ။
ပန်းကန်လုံးအသေးတစ်ခုထဲမှာ သကြားနဲ့ သံပရာရည်ကိုထည့်ပြီး သကြားအရည် ပျော်သွားအောင်မွှေပါ။ ပြီးရင် ငံပြာရည်ပါထည့်ပြီး ကြက်သွန်ဖြူ၊ ဂျင်း နဲ့ငရုတ်သီးတွေကိုပါထည့်မွှေပါ။
Related Article >>> ဆရာကျကျ ကြက်ဥပြုတ်မယ်
အနှစ်ရပြီဆိုရင်တော့ သရက်သီးစိမ်း၊ မုန်လာဥ၊ ကြက်သွန်မြိတ်၊ ကြက်သွန်နီ၊ နှမ်းရွက်၊ နံနံ၊ ငှက်ပျောဖူး၊ ငရုတ်သီးမှုန့် နဲ့ ငါးအရေခွံတွေ အကုန်လုံးကို ရောနယ်ပေးပါ။ အပေါ့အငန်မြည်း၊ လိုသလို ချိန်ဆထည့်ပေါ့။ ပြီးသွားရင်တော့ ပန်းကန်ထဲထည့်၊ မြေပဲထောင်းလေးတွေဖြူးပြီး ဆန်ပြားခြောက်နဲ့ တွဲစားလို့ရပါပြီ။
ဒီဟင်းပွဲလေးမှာ ခန္ဓာကိုယ်အတွက် အကျိုးရှိစေတဲ့ ကော်လာဂျင်၊ သတ္တုဓာတ်၊ ဗီတာမင် စီ၊ မပျော်ဝင်ဆီ နဲ့ အင်တီအောက်ဆီဒန့်တွေ ပါဝင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် အာဟာရပြည့်ဝစေပြီး ခံတွင်းပျက်နေသူတွေ၊ ဝမ်းချုပ်သူတွေ၊ သွေးအားနည်းနေသူတွေ၊ အဝလွန်သူ၊ ဆီးချိုရှိသူ၊ သွေးတွင်းအဆီများနေသူတွေအတွက် သင့်တော်ပါတယ်နော်။
ဘယ်လိုလဲ..စားချင်သွားပြီမလားယောင်း? အခုပဲ မြန်မြန်ထချက်လိုက်တော့နော်…
စမ်းချောင်းသူခိုင်ဇာ (For Her Myanmar)
ခြိုခြိုခဉျြခဉျြနဲ့ အရသာရှိတဲ့အပွငျ ကနျြးလညျးကနျြးမာစတေယျဆိုတော့ကား…
ထိုငျးမလေးတှေ အသားအရကွေညျကွညျလေးနဲ့ သှယျသှယျလလြလြေး ဖွဈနကွေတဲ့ လြှို့ဝှကျခကျြက ငါးအရခှေံလို့ ပွောရငျ ယုံမလား ယောငျးတို့… ငါးအရခှေံမှာပါတဲ့ collagen (ကျောလာဂငျြ) က အသားအရကေို တငျးရငျးကွညျလငျစပေါတယျ။ လတျဆတျတဲ့ အသီးအရှကျတှကေလညျး အာဟာရပွညျ့ဝစပွေီး အဆလညျးနညျးတယျဆိုတော့ ကနျြးမာရေးနဲ့ညီညှတျတဲ့ ဒီငါးအရခှေံသုပျက တကယျလညျး ထိုငျးမလေးတှရေဲ့ လြှို့ဝှကျခကျြဖွဈနိုငျတယျနျော။ ကိုယျတှလေညျး စားဖို့ အခြိနျတနျပွီလေ… လှလှ၊မလှလှ စားကောငျးရငျတော့ စားရမှာပဲရယျ 😛
၁။ ငါးအရခှေံခွောကျ ၁၀၀ ဂရမျ
၂။ သရကျသီးစိမျး ၁၀၀ ဂရမျ
၃။ မုနျလာဥ ၅၀ ဂရမျ
၄။ ကွကျသှနျနီ ၅၀ ဂရမျ
၅။ ကွကျသှနျမွိတျ ၅၀ ဂရမျ
၆။ ငှကျပြောဖူး ၁၀၀ ဂရမျ
၇။ နှမျးရှကျ ၁၀၀ ဂရမျ
၈။ တရုတျနံနံ ၁၀ ဂရမျ
၉။ မွပေဲလှျော ၅၀ ဂရမျ
၁၀။ ခငျြး ၅၀ ဂရမျ
၁၁။ ဆနျအရကျ ၃၀ ml
၁၂။ ကွကျသှနျဖွူ ၁၀ ဂရမျ
၁၃။ သံပရာသီး ၁ လုံး
၁၄။ မီးကငျထားတဲ့ ဆနျပွား ၂ ခု
၁၆။ ငါးငံပွာရညျ ၅ ml
၁၇။ ငံပွာရညျ ၅ ml
၁၈။ ငရုတျသီးမှုနျ့ ၁၀ ဂရမျ
အသုပျထဲမှာ ထညျ့နယျဖို့ အရသာစပျမယျဆိုရငျတော့
ငါးငံပွာရညျ ၃၀ ml
သံပရာရညျ ၅၀ ml
သကွား ၈၀ ဂရမျ
ဆား ၅ ဂရမျ
ကွကျသှနျဖွူ ၅၀ ဂရမျ
ဂငျြး ၁၀ ဂရမျ (အမြှငျလေးတှဖွေဈအောငျ လှီးထားပါ။)
ငရုတျသီးအနီ ၅ ဂရမျ (ထောငျးထားပါ။)
ငါးအရခှေံကို ခငျြး ၂၀ ဂရမျ၊ သံပရာရညျ၊ ဆနျအရကျ တို့နဲ့အတူ တဈရကျလောကျ ကွိုစိမျထားလိုကျပါ။ အရခှေံတှပှေလာပွီဆိုရငျ ငါးအရခှေံမှာ ကပျနတေဲ့ အသားတှကေို ဖယျထုတျလိုကျပါ။ ပွီးရငျတော့ ခငျြး ၂၀ ဂရမျ နဲ့ ဆနျအရကျ ၁၅ ml တို့နဲ့အတူ ရနေညျးနညျးထညျ့ပွီး ၅ မိနဈလောကျ ပွုတျထားလိုကျပါ။ ပွုတျပွီးရငျ အရခှေံတှကေို အညှီနံ့ပွောငျသှားအောငျ ရနေဲ့ အထပျထပျဆေးပါ။
သရကျသီးတှကေို အခှံခှာပွီး အမြှငျလေးတှဖွေဈအောငျ လှီးထားပါ။ ငှကျပြောဖူးကို ပါးပါးလှီးထားပါ။ ကွကျသှနျနီကိုလညျး အခှံခှာ၊ အကှငျးလေးတှဖွေဈအောငျ လှီးထားပွီး မုနျလာဥကို အမြှငျဖွဈအောငျလှီးထားပါ။ ကွကျသှနျမွိတျကိုလညျး လှီးထားပါ။ တရုတျနံနံပငျနဲ့ နှမျးရှကျတှကေိုလညျး ရိတျရိတျလေးတှေ လှီးထားပါ။ ကနျြတဲ့ ခငျြးတှကေို အမြှငျလေးတှဖွေဈအောငျ လှီးထားပါ။
ငါးအရခှေံတှကေို သနျ့စငျပွီးပွီဆိုရငျတော့ လကျမဝကျလောကျ အပိုငျးလေးတှေ ဖွဈအောငျ ညှပျထားလိုကျပါ။ အိုးတဈခုကို အပူပေး ဆီအနညျးငယျထညျ့ပွီး ကွကျသှနျဖွူ နဲ့ ခငျြးကို ဆီသတျပါ။ ပွီးရငျတော့ ငါးအရခှေံတှကေိုပါထညျ့ပွီး ကွျောပေးပါ။ (တကယျလို့ မွနျမွနျလညျး စားခငျြတယျ၊ အလုပျလညျးမရှုပျခငျြဘူးဆိုရငျတော့ ရယျဒီမိတျ ငါးအရခှေံကွျောထုပျလေးနဲ့ သုပျလို့ရပါတယျယောငျးရေ။)
ပွီးရငျတော့ ဆနျအရကျကိုပါ ထညျ့ပွီး မီးအပူကို လြှော့ထားလိုကျပါ။ နောကျဆုံးမှ ငံပွာရညျအနညျးငယျထညျ့ပွီး ဆကျကွျောပေးပါ။ အနံ့မှေးလာပွီဆိုရငျ မီးပိတျပွီး ငါးအရခှေံတှကေို အအေးခံထားလိုကျပါ။
ပနျးကနျလုံးအသေးတဈခုထဲမှာ သကွားနဲ့ သံပရာရညျကိုထညျ့ပွီး သကွားအရညျ ပြျောသှားအောငျမှပေါ။ ပွီးရငျ ငံပွာရညျပါထညျ့ပွီး ကွကျသှနျဖွူ၊ ဂငျြး နဲ့ငရုတျသီးတှကေိုပါထညျ့မှပေါ။
Related Article >>> ဆရာကကြ ကွကျဥပွုတျမယျ
အနှဈရပွီဆိုရငျတော့ သရကျသီးစိမျး၊ မုနျလာဥ၊ ကွကျသှနျမွိတျ၊ ကွကျသှနျနီ၊ နှမျးရှကျ၊ နံနံ၊ ငှကျပြောဖူး၊ ငရုတျသီးမှုနျ့ နဲ့ ငါးအရခှေံတှေ အကုနျလုံးကို ရောနယျပေးပါ။ အပေါ့အငနျမွညျး၊ လိုသလို ခြိနျဆထညျ့ပေါ့။ ပွီးသှားရငျတော့ ပနျးကနျထဲထညျ့၊ မွပေဲထောငျးလေးတှဖွေူးပွီး ဆနျပွားခွောကျနဲ့ တှဲစားလို့ရပါပွီ။
ဒီဟငျးပှဲလေးမှာ ခန်ဓာကိုယျအတှကျ အကြိုးရှိစတေဲ့ ကျောလာဂငျြ၊ သတ်တုဓာတျ၊ ဗီတာမငျ စီ၊ မပြျောဝငျဆီ နဲ့ အငျတီအောကျဆီဒနျ့တှေ ပါဝငျပါတယျ။ ဒါကွောငျ့ အာဟာရပွညျ့ဝစပွေီး ခံတှငျးပကျြနသေူတှေ၊ ဝမျးခြုပျသူတှေ၊ သှေးအားနညျးနသေူတှေ၊ အဝလှနျသူ၊ ဆီးခြိုရှိသူ၊ သှေးတှငျးအဆီမြားနသေူတှအေတှကျ သငျ့တျောပါတယျနျော။
ဘယျလိုလဲ..စားခငျြသှားပွီမလားယောငျး? အခုပဲ မွနျမွနျထခကျြလိုကျတော့နျော…
စမျးခြောငျးသူခိုငျဇာ (For Her Myanmar)
Tags: fish, Food, Healthy, salad, skin, sour, Sweet, Thai